Osoo walfaannee hin guutiin,jalqaba hangii man'ee fili.
Seeraa ittiin xumuraa ka'amee fayyadamun ofumaan walfaannee itti fufuuf,erga qaaqa Walfaannee Guuti bantee booda dirqaalaOfiinguutaa fili.
kallattii walfaannee uumame murteessa.
Dabala i bsame fayyadamuudhaan hammanga man'ee targaa filatameef walfaannee gargadii uuma.
Dabala ibsame fayyadamuudhaan hammanga man'ee wajjin bitaadhaa gara mirgaatti uuma.
Dabala ibsame fayyadamuudhaan hammanga man'ee targaa filatameef walfaannee garolii uuma.
Dabala ibsame fayyadamuudhaan hammanga man'ee wajjin mirgaa gara bitaatti uuma.
Dabala ibsamee fi gatii dhumaa fayyadamuudhaan walfaannee lakkoofsa sararoo uuma.
Dabala ibsamee fi gatii dhumaa fayyadamuudhaan walfaannee guddinaa uuma.
Dabala ibsamee fi gatii dhumaa fayyadamuudhaan walfaannee guyyaa uuma.
ofnaa guutuun sarxaa ibsame fayyadamuudhaan gatii walfannee xumura.Walfaanneen 1,3,5 battalumatti 7,9,11,13 fi kkf wajjin xumurama.Guyyaa fi yeroon haala jiruun xumurama.Fkf 01.01.99 fi 15.01.99,guyyaa 14 fayyadama.
Naannoo kanatti safartuu yeroo barbaanne adda baasuu dandeenya.Naannoon kun kan sinsinaa'u yooDate gosa walfaanneefilatamee dha.
Walfaanneedhaaf gatii jalqabaa murteessa. Lakkoofsota,guyyoota ykn yeroo fayyadama.
Walfaanneedhaaf gatii dhumaa murteessa. Lakkoofsota,guyyoota ykn yeroo fayyadama.
Jechi "dabala" jedhu amma gatiin kenname tokko ittiin dabalu bakka bu'a.Gatii Walfaannee gosa filatamee adeemsa hunda keessatti dabalamu murteessa. Galiinsi kan ta'u yoo sararoon,guddinni ykn guyyaan filatameedha.
Title is: Walfaannee Guuti